ကျွန်တော်နားစည်ကို ရိုက်ခတ်လာတဲ့ခပ်တိုးတိုးအသံလေးကို နှလုံးသားကနေကြားလိုက်ရပါ
တယ်။စိုနင့်နင့် မျက်လုံးအစုံကနေသူမကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူမလည်း မျက်ရည်တိုဖြင့်
” မိုး …. သွားတော့မယ်နော် ”
မျက်ရည်စက်များနဲ့ပြေးထွက်သွားတဲ့ ချစ်သူကိုကြည့်နေရင်းကနေ နှလုံးကို
ပျောက်ရှခဲ့ရလေပြီ ။ တကယ်ဆို အမှားများနဲ့စတင်ခဲ့မိခဲ့တာပါ ချစ်သူ
နှုတ်မဆက်ပါရစေနဲ့ချစ်သူ ငါဟာ ရက်စက်ခံရခြင်းတို့နဲ့အသားကျခဲ့သူပါ..။
ရင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ မင်းခိုက်စိုးစံရဲကဗျာတစ်ပုဒ်က ကျွန်တော်အတွက်ရည်ရွယ်လိုက်လေသလား –
” စံပါယ်တွေ တ၀ုန်းဝုန်းရွာတာတောင်
နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် တကသိုလ်ဝင်တန်းဆိုတော့ ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့
သူငယ်ချင်းတစ်ခု section တစ်ခုသွားတက်ကျရင်းအမှတ်မထင်သူမနဲ့
သူမကို ကျွန်တော်စွဲလမ်းမိခဲ့တယ် ။ သူမကိုစိုက်စိုက်ကြည့်တိုင်း
”ဟေ့ကောင် .. ကြည့်လှချည်းလားကွ”
ကျွန်တော်ဘော်ဒါညီညီ က ဘေးနားကအလန်တကြားပြောလိုက်တာ လူတောင်
”မင်းကလည်းကွာ ဒီမှာ ဖီးလ်လေးတောင်ဘယ်ရောက်သွားလည်းမသိဘူး”
”အေးကွ ငါလည်းမသိဘူးလို့” ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့
မင်းလိုက်မလိုလား သူငယ်ချင်းလို့ သူပြန်မေးတယ် ။ကျွန်တော်အဖြေမပေးမိပေမယ့်
ဘော်ဒါကတော့ ပေါက်ပြီးသားဆိုတော့ဘာမှဆက်မမေးတော့ဘူး ။ဆက်ရှင်တန်းအဆင်းမှာ
သူမ အပြန်ကိုနောက်ယောင်ခံရင် လိုက်ကြည့်မိတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် သူနဲတွဲတဲ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့တစ်ကျောင်းထဲသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့
ညိုညို ဆီကနေသူအကြောင်းတွေတော်တော်များများသိခဲ့တယ် ။အရေးကြီးတဲ့အချက်တချက်
ကိုမသိခဲ့ခြင်းက ကျွန်တော်တို့တွေ အဝေးဆုံးဝေးကွာခဲ့တာကို ကျွန်တော်များကြိုသာသိခဲ့ရင်
အညိုကျေးဇူးနဲ့ သူနဲခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ် ။သူနာမည်က မိုးမိုး တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နတ်ဖုရားမလေး
ဖြစ်လာမဲ့သူပေါ့ ။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်နားက မြိုတစ်ခုက ဒီမှာတကသိုလ်ဝင်တန်းလာတက်တာ
ဆိုတာသိလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲခင်မင်မှုတွေကနေ ရင်းနှီးခဲ့ ထိုနောက် ထိုနောက်တော့
ကျွန်တော်နံနက်ခင်တွေအဓိပါယ်ရှိခဲ့ရလေပြီ ။အချစ်ဦးလေးမို့အရူးအမူး သူလည်းကျွန်တော်
နဲ့ထပ်တူ ရွှေရောင်နေ့ရက်တို့ဟာ နေခြည်နွေးနွေးနဲ့တောက်ပခဲ့ရတာပေါ့ ။
ကျောင်းဖွင့်ခါနီပြီဆိုတော့ အိမ်ကအပြင်မှာမတက်စေချင်ဘူး အိမ်မှာသီသန့်ဝိုင်းပဲလုပ်ပေးမယ်
ဆိုတော့ ချစ်သူကိုခေါ်ရတာပေါ့ .. ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ရယ် သူငယ်ချင်းညီညီရယ်
ချစ်သူရယ် နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ် စုပေါင်းပြီးဝိုင်းလေးလုပ်ကျတယ်
ချစ်သူကိုအိမ်ခေါ်လာတော့မှ ………….ဘုရားစင်ကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး
မောင်က ××× ဘာသာကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟင်တဲ့ ။မဟုတ်ဘူးလိုကျွန်တော်ပြော
လိုက်တော့ သူမျက်နှာလေးက နွမ်းနွမ်းလေးဖြစ်သွားရှာတယ် ။အမှန်တိုင်းပြောရရင်
ကျွန်တော်လည်း သူကိုဘာသာတူဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့တွေ အဖွင့်ပွဲမှာပဲ
သူမကိုပြန်လိုက်ပိုတော့ လမ်းမှာအအေးဆိုင်ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ကျတယ် ။သူများမျက်နှာလေးက
ညှိုးနေတယ် ကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှန်းမသိပဲ သူမျက်နှာလေးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်
စိတ်ညစ်သွားလို့လား မိုး ကျွန်တော်အမေးကို လေးတွဲတွဲခေါင်းခါပြရင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှာ
” မိုး .. အိမ်က ဘာသာမတူရင် သဘောတူကျမထင်ဘူး မောင်
နောက်ပြီးတော့ မောင်ကို မိုးတို့နဲဘာသာတူတူပဲလိုထင်ခဲ့မိတာတဲ့ ”
ကျွန်တော်သူမကိုဘာပြောရမှန်းမသိပဲ တွေငေးနေခဲ့တာအတော်ကြာပြီးတော့မှ” မိုး ရယ် အချစ်ဆိုတာ ကန့်သတ်ပြီးမှ ချစ်လိုရတာမှမဟုတ်တာ .. အချစ်ဆိုတာ
ဖန်တီးလိုမရသလို ဖျက်ဆီးလိုလည်းမရတာပဲ ဒါတစ်ခုအတွက်နဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့
နူးညံ့တဲ့အရာတစ်ခုကို ဖျက်ဆီးလိုက်ရမှာလား ”
အတော်လေးကြာမှ သူမပြုံးလာတယ် ပြီးတော့
” ဟုတ်ပါတယ် မောင် ။မိုး စကားပြောမှားသွားတယ်တဲ့ ”
အပြန်လမ်းမှာ ကျွန်တော်သူမရဲ့ သနပ်ခါးနံ့သင်းသင်းပါးပြင်လေးကို ဖွဖွလေးနမ်းမိခဲ့တယ်
” အရမ်းချစ်တယ် မိုးရယ် ”
သူမကိုအိမ်လိုက်ပို့ပြီး အိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ မင်းခိုက်စိုးစံရဲ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို
“‘ ချစ်သူတွေအတူတူရှုရတဲ့ အသက်တန်ဖိုးဟာ ကမ္ဘာကြီးပိုင်စိုးရတာထက်ပိုပါတယ် ”
ခြားနားချက်တွေမေ့လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ပျော်စရာတွေနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းခဲ့။
မနက်ကျောင်းသွားရင် အစောကြီးထလို့ နံနက်စောစောမနိုးတတ်တဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုအစောကြီးထလို့ ချစ်သူဆီအခစားရောက်ခဲ့တယ် မှောင်ရီပျိုးပြမှာပဲချစ်သူအိမ်ရှေကနေ လီဗာကိုခပ်သာသာလေးပုတ်လိုက်ရင် မီးရောင်လေးကဖြတ်ခနဲလင်းလက်လိုက်ပြီး မကြာခင် အမြဲတန်းရနေကျချစ်သူရဲ သနပ်ခါးနံ့လေးတွေ
နှာခေါင်းဝကိုလာရောက်ပါတော့တယ် ။ကျွန်တော်ပါးကို ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းပြီးရင် အေးတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်လုံးချင်းပူးကပ်ပြီးဖက်ထားလိုက်ကျတာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး
သူနဲကျွန်တော်နဲ့က အတန်းချင်းမတူကျဘူး ဒါပေမယ့် အချိန်လစ်တိုင်းသူကိုသွားသွားကြည့်ရတာအမော ကျွန်တော်ရဲ့ရူးသွပ်မှုတွေက အထွဋ်အထိပ်တက်လို့ မုန်စား
ကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာ မုန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတိုးဝှေ့စားလို့ အပြန်ကျတော့နေ့လည်ဆိုတော့ကျွန်တော် လိုက်ပိုလို့မရဘူး သူဘက်ကသိသွားရင် ကျွန်တော်ဘက်ကသိသွားရင်
ပြသနာတက်မှာဆိုးလို့ သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ နေလည်ဝိုင်းစရင် တွေရမှာပဲ အိမ်မြန်မြန်တန်းပြန်ရေချိုးပြီး ချစ်သူအလာကိုစောင့်လို့ အိမ်အရှေ့က အကိုကြီးကွမ်းယာဆိုင်မှာ
ထိုင်ပြီးချစ်သူအလာကိုစောင့်နေမိတယ် ။ကျွန်တော်ရဲ့ သင်တန်းမှုးဆရာလည်းဆိုပါတော့နမ်းပုံနမ်းနည်း ဘယ်လိုဘာညာ ဆိုပြီးဆရာသမားရဲ့လက်ချာကို ချစ်သူအလာမှာ
ကျွန်တော်ကလည်း လက်တွေ့နည်းကျတဲ့သိပံသမားပီပီ အမှန်ကန်စမ်းသတ်ခဲ့သူပါ
” ကောင်လေး ဟိုမှာ မင်းကောင်မလေးလာနေပြီတဲ့ ”
ဘယ်သူမှမရောက်ခင် ချစ်သူနဲ့တွေဖို့ အိမ်တံခါးလေးဖွင့်အသာလေးစောင့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ အိမ်က၀ိုင်းက အပေါ်ထပ်မှာဆိုတော့ ချစ်သူကိုဖက်လိုအပေါ်ထပ်ကို
တက်ပြီး နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လို့ ကမ္ဘာကြီး ကိုမေ့လို့အရာအားလုံးမေ့လိုနေခဲ့တယ် ။အဲဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့တွေ အချစ်သက်သက်
ရမက်မပါပဲခံစား လို့။ ကျွန်တော်သူပါးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တော့ သူမမျက်လုံးအစုံကမှိတ်လို့ ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာ သူမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေက ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်
နေတယ်။ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တုန်ရီရီဖြစ်လာပြီး မရဲတစ်ရဲနဲ့ သူမနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းရှိုက်လိုက်တယ် သူမမျက်နှာလေးကပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ အရောင်ပြောင်းသွားပြီး
ဆတ်ခနဲ ရုန်းထွက်သွားပြီး တဖက်ကိုလှည့်သွားပြီးတော့ ရှက်နေသလိုကြောက်သလိုနဲ့တုန်ရီနေလေရဲ့။
” မိုး ဘာဖြစ်လိုလည်းဟင် “”
“ကိုယ့် ကိုစိတ်ဆိုးသွားတာလား ”
တကယ်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအစိမ်းသက်သက် ဘာအတွေအကြုံမှမရှိပဲ ဆနတစ်ခုက နှစ်ဦးစလုံးကိုတိုက်တွန်လိုနေတော့တယ်။ချစ်သူရဲ နွမ်းလှလှ သက်ပြင်း
ချသံနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ တရှိုက်မက်မက်ပြန်နမ်းလို့ ရင်ခုန်သံသွေးတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ဆူညံ့နေလို့ ……။
နောင်တော်တွေသင်ကြားပြသထားတဲ့ နည်းစနစ်အတိုင်း နောက်တစ်ဆင့်ကျုးကျော်နယ်ချဲဖို့သူမရဲ ရင်သားသေးသေးကို ထိကိုင်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ လူလွန့်ရုန်းထွက်ပြီး သက်
ပြင်းတွေအကြိမ်အခါခါချလို့ ကျွန်တော်တို့လူချင်းပြန်ခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နှစ်ယောက်လုံး
နွမ်းနယ်မောဟိုက်နေတယ် မပြည့်စုံသောဆနကလည်း နှစ်ဦးစလုံးကို တစ်စုံတစ်ခုစီတွန်းပို့နေတော့တယ် ။
” မောင်ရယ် .. မောတယ်ကွယ် “” တဲ့ မောဟိုက်နေတဲ့သူမအသံတိုးတိုးလေးနှင့်အတူရင်ခွင်ထဲပြိုလဲကျလာတော့တယ်။
“” ကလင် ………. ကလင် “”
အိမ်အပြင်မှာတပ်ထားတဲ့လူခေါ်ဘဲလ်ရဲအသံက နှစ်ယောက်စလုံးကို သွေးရူးသွေးတန်းဖြစ်စေပြီး ကယောင်ကတန်းဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဘူး
ယောက်ကျားလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က ဖြတ်ခနဲ့ဆို သူမကို ကျွန်တော်အခန်းထဲတွန်းထည့်ပြီး အ၀တ်အစားတွေ
သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ခိုင်းထားတယ် ။ကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေကို အောက်ထပ်မှာအချိန်တစ်ခုဆွဲပြီးထိန်းထားမယ်လို့ ပြောရင်းကနေ
အလိုက်သိတဲ့ဘော်ဒါရင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ညီညီကတော့ အောက်ထပ်မှာပြုံးပြုံးကြီးစောင့်နေတယ်။သူအားလုံးသိပြီးသားတဲ့
အရှေ့ကကွမ်းယာဆိုင်မှာဆေးလိပ်သွား သောက်ရအောင်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သား ဆေးလိပ်မသောက်တတ်သောက်တတ်နဲ့
ဖွားနေရင်း ဆရာအလာကိုစောင့်နေတော့တယ် ။ကျွန်တော်အိမ်က ပညာရေးနဲပတ်သက်ရင်အတော်ကလေး တင်းကျပ်
တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ အပြင်ထွက်ခွင့်က ညနေအချိန် တစ်နာရီအပြင်ထွက်ခွင်ရှိတယ် အဲဒါပြီးရင်အိမ်အရောက်ပြန်
တကသိုလ်ဝင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အပျော်အပါးတွက်အချိန်ကုန်မခံရလို့ အိမ်ကလူကြီးများကလည်း ယူဆထားပုံရပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ညဘက်စောင့်မယ့် ဂိုက်လုပ်တဲ့ အကိုဝမ်းကွဲရောက်နေပါပြီ ။အဲဒီအချိန်တစ်နာရီ
လေးအတွင်းမှာပဲ ချစ်သူအိမ်ရှေ့ကိုအပြေးလေးရောက်သွားခဲ့တယ် ။ ဟွန်းခပ်ပြင်းပြင်းနှစ်ချက်လောက်ဆင့်တီးလိုက်ရင် ပြတင်းပေါက်ကလေးက
ကျွန်တော်ချစ်သူမျက်နှာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ် ။ မျက်လုံးကနေတဆင့်စကား ပြောပြီးရင် ဘော်ဒါနဲအတူ
မြစ်ကမ်းဘေးနားက အုပ်ခုံပေါ်မှာထိုင်ရင် ဆေးလိပ်ဖွာလို့ အချစ်အကြောင်းတွေနှီးနှောကျတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းတွေပြောဖြစ်ရင်း သူအိမ်မှာ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်ရဲဖိုမဆက်ဆံရေးစာအုပ်ရှိတယ်အကြောင်းသိတော့
ကျွန်တော်ငှားဖတ်မိတယ်။နားမလည်တဲ့အစပျိုးခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကို အတွေကြုံရှိတဲ့ အိမ်ရှေကွမ်းယာဆိုင်က အကိုကြီးကိုမေးမြန်း
မိတော့ ။ကျွန်တော်ကို ပထမဆုံးသင်ပေးလိုက်တဲ့ နည်းစနစ်ကတော့ “မွေးစကလေးသင်ခန်းစာတဲ့ ” ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျေညက်ဖို့ ကြိုးစားရတော့မယ်ပေါ့ ။
ဆော့စရာပစည်းတစ်ခုရထားတဲ့ ကလေးလို့ဟိုဟာကလေး ကဘယ်လို ဒီဟာကလေးကဘယ်လိုစူးစမ်းချင်စိတ်အပြည့်နဲ့ ..။
မနက်ဖြန်တွေကျသေးတာပေါ့ကွာလို့ စိတ်ထဲကရေရွတ်မိပြန်တယ်။အိမ်ပေါ်တက် စာလုပ်စရာရှိတာတွေအပြေးလုပ်လို့ ကျွန်တော်စာဖတ်ရဦးမယ်လေ
ဂိုက်လုပ်တဲ့အကိုဘယ်တော့ အိပ်မလဲဆိုတာစောင့် ဖွက်ထားတဲ့စာအုပ်နေရာကိုလည်းခဏခဏကြည့်လို့ သင်ခန်းစာဆိုတာကျေညက်မှ အောင်ချက်မယ်လေ။
အကိုဝမ်းကွဲအိပ်ပီဆိုတာနဲ့ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်ကို ထုတ်ပြီးကျေညက်အောင်ဖတ်ရှုလေတော့တယ်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာ ပုံဆွဲညံ့သလောက်
ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်ရဲ သရုပ်ပြပုံတွေကိုအလွတ်ရအောင်ကြိုးစားမိတော့တယ် ။
မနက်ဖြန်ရယ် မြန်မြန်လာပါတော့ ။
ဒီနေ့ကျောင်းမတက်တော့ပါ ။ချစ်သူကိုလည်းကျောင်းတက်မခိုင်းထား တော့ဘူး စောစောစီးစီးလာခဲ့ဖို့ချိန်းထားလိုက်တယ် အကြောင်းပြချက်အနေနဲ့ကတော့ နားမလည်တာတွေပြန်ကျက်
ရအောင်ပေါ့ ။ အမှန်တော့မဟုတ်ပါ ကိုယ်စမ်းချင်နေတာကိုအကြောင်းပြချင်းသက်သက်ပါပဲကျွန်တော်အိမ်က မိဘတွေက မနက်စောစောဆို ဈေးသွားကျပြီး ညနေ ငါးနာရီခြောက်နာရီ
လောက်မှပြန်ရောက်ကျတာ တစ်နေ့လုံးကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးဆေးနေလို့လည်းရတယ်လေ။ စာစောစောဖတ်ပြီး ချစ်သူအလာကိုစောင့်နေပါတော့တယ်
ချစ်သူနဲ့ချိန်းထားတာ ၁၂နာရီ ၁၁ခွဲလောက်မှာအပြင်ထွက် အိမ်တံခါးကို သောချိတ်ပြီးတော့ ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ဆေးလိပ်ဖွာပြီး ချစ်သူကိုစောင့်နေတာ ရင်ခုန်သံတွေက စည်းချက်မမှန်
ကတုန်ကရင်နဲ့ .. ။အလိုက်သိတဲ့ချစ်သူ တံခါးလေးအသာဖွင့်လို့ သူဘာသာအပေါ်တက်ပြီးစာအုပ်တွေဘာတွေထုတ်လို့စာကျက်နေတယ်။ကျွန်တော်တက်သွားတော့ စာကျက်နေတာကရပ်ပြီး မော့ကြည့်
တယ်။သူမ ပါးကလေးကိုဖွဖွလေးနမ်းပြီးတော့ ” ဒီနေ့အရမ်းလှတာပဲ မိုး ” လို့ပြောလိုက်တော့မျက်စောင်းလှလှလေးထိုးလို့ ကျွန်တော်ကို ပြန်ပြောတယ် ” မနေက မလှဘူးပေါ့ ဟုတ်လား မောင် “တဲ့ ။ကျွန်တော်ကို ဂစ်တာတီးခိုင်းတယ် ကိုဇော်ပိုင်ရဲ မင်းနဲ့မှချစ်တတ်ပြီပေါ့ သီချင်း —-
” အချစ်အကြောင်းများ မသိခဲ့ဖူး .. ငယ်စဉ်ကအသက်အရွယ်မှာ
ရူးလောက်တဲ့အချစ်များလည်း … တကယ်ကို မတွေးမိသေးပါ
ဒဏ္ဍာရီအလွမ်းအဆွေးမျိုးနဲ့ .. တစ်နေ့တော့ဖြင့် ဒို့ကြုံမှာမတွေးမိသေးပါ
ကိုယ်နှလုံးသားလေးလည်း .. ရင်ခုန်နှုန်းထိမ်းဖို့ခက်တယ် “”
ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသူနှင့်အပတ်သက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဆိုပြမိသေးတယ်။သူနဲသမီးရည်းစားမဖြစ်ခင်ကတဲ့က ဆိုခဲ့တဲ့ ။
“”အခြေနေမတူရင် မချစ်ရဘူးလို့ ……. ပြညတ်ချက်တွေရှိထားလား
အချစ်ဆိုတာပြောရခက်တာမို့ …. တို့ချစ်မိတာအပြစ်ရှိလား “”
ကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းတိုးဝင်လာတဲ့ချစ်သူလေးရဲ့ ပါးကိုဖွဖွနမ်းလို့ တရှိုက်မတ်မတ်နဲ့အတူတူနေရတဲ့အသက်တန်ဖိုးကို ခံစားလို့ ကမ္ဘာကြီးကိုပိုင်စိုးနေလိုက်တာ လောကကြီး
တစ်ခုလုံး အပြာရောင်နဲအတိ ။သူရဲ့နှုးညံ့တဲ့အနမ်းတို့ရဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်စိတ်တွေလွင့်ထွက်လို့ နှုတ်ခမ်းဖျားလေးပူထူလာတဲ့အထိ ပြင်းပြင်းပြပြနမ်းနေမိတယ် မိန်းမောနေတဲ့သူမရဲ့
ရင်သားသေးသေးလေးတွေကို စုတ်ကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူမတောင့်တင်းသွားတယ် ။”မောင် ရယ် မကိုင်ပါနဲ့တဲ့ ” ငြင်းဆန်မှုမှာ အင်အားတို့ချို့တဲ့လို့ ။ကျွန်တော်စိတ်တွေလွင့်ထွက်
သွားပါပြီ သူမရဲ တီရှပ်ကလေးအသာမပြီး ဘရာလေးကို ပင်တင်လိုက်တော့ တောင်ပန်သံတိုးတိုးလေးထပ်ထွက်လာပြန်တယ် ။ “” တော်ပြီနော် .. မောင် ” “ရှက်လို့ပါ ”
တဲ့အုပ်ထားတဲ့သူမရဲ့လက်ကိုအသာလေးဖယ်မပြီးတော့ ရင်သားလုံးလုံးလေးကိုအသေချာကြည့်မိတော့် ခေါင်းလေးတွေက ရင်သားထဲမှာ မြုပ်ဝင်နေတယ် နှုတ်ခမ်းဖျားနဲ့ အသာ
ငုံလိုက်တော့ သူမတစ်ကိုယ်လုံး တောင့်တင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်ဆံပင်တွေကို စုပ်ကိုင်ထားတာ မွှန်နေတဲ့အရှိန်နဲ့ သူကအတင်းဆွဲလေ ကျွန်တော်ကစို့လေပါပဲ ။ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာ
သူမ ငြီးသံလေးတွေနဲ့ ဆူညံလို့နေတော့တယ် ။
ကျွန်တော်ရဲလက်တွေက ရင်သားသေးသေးကိုစုတ်ကိုင်ထားမှ သူမရဲ့ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးတွေဆီကို တားဂတ်ပြောင်းသွားပြီး တစ်ရွှေ့ရွှေ့နှင့် သူမရဲ စကဒ်လေးအောက်ကိုတိုးဝင်သွား
ခဲ့တယ်။သူမကတော့ ကျွန်တော်ဆံပင်တွေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး မျက်လုံးကိုတင်းတင်းပိတ်လို့ သူမရဲ့ တားဂတ်ပွိုင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်လက်ကိုဖမ်းကိုင်ပြီးတော့
သူမပေါင်နှစ်လုံးကို အတင်းညှပ်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မရတော့ဘူး တားဂတ်ဟာကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေပြီ ပူနွေးနွေးနဲ့ ပင်တီလေးအောက်ဘက်အစွန့်မှာအနည်းငယ်စိုစိစိလေး
ဖြစ်နေတယ် ။ကျွန်တော်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ပထမဆုံးသော ထိတွေ့ဖူးခြင်းပါ ။ပင်တီလေးအသာဟပြီးတော့ သူရဲ့ နူးညံ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုထိတွေလိုက်ပါတော့တယ်၊
အမွေးလေးတွေရေးရေးလေးရှိနေတဲ့ သူမရဲ့ နူးညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းကို အသာလေးအုပ်ကိုင်ထားတာကနေ လက်ခလယ်ကို သူမရဲမြောင်းလေးထဲကို အသာလေးနှိမ့်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ကိုအရမ်းတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုဖက်ထားပြီးဗလုံးဗထွးရေရွတ်သံတွေနဲ့ ပြောပြမတတ်တဲ့ ငြီးသံလေးတွေပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။
အင်မတန်ထူးခြားတဲ့နူးညံ့တဲ့နေရာလေးဟာ စိုစွတ်နေပါတော့တယ် အပြန်အလှန်ပွတ်သတ်လိုက်တဲ့အခါမှ သူမဆီက အရမ်းမောလာသလိုမျိုး အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီး
ပိုမိုစိုစွတ်လာပါတော့တယ်။ ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲက စာတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး အရသာပိုမိုခံစားနိုင်တဲ့ အာရုံခံစားနိုင်တဲ့နေရာလေးကို ရှာဖွေနေမိတော့တယ် ။တကယ်တန်းပြောရရင်
ကျွန်တော်သေသေချာချာရှာမတွေခဲ့ပါဘူး ။ပထမဆုံးအတွေအကြုံဆိုတော့ ဒါပေမယ့်သူမ ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပျော်တယ်ဒါပဲသိတယ် ။အပေါ်အောက် တောက်လျှောက်
ပွတ်သတ်နေရာကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်း မြန်သထက်မြန်လာသလို သူမကျွန်တော်ကိုဖက်ထားရင်းကနေ ကော့ပြန်လန်လာပါတယ် ။ ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ သူမအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်နီးကပ်
လာပြီဆိုတာ ထိုနောက်တော့ ကျွန်တော်ကိုအတင်းကုတ်ဆွဲပြီး သူမ မွှေရာပေါ် ပြိုလဲ ကျသွားပြီးတော့ ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ် ။ကျွန်တော်သူမပါးလေးကိုဖွဖွလေးနမ်းလိုက်
တော့ “” မောင် … မကောင်းဘူးတဲ့ “” ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းမလဲ သူပဲကောင်းတာကိုး ။ကျွန်တော် တကယ်တန်းပြောရရင် ရှေ့ဆက်ချင်ပေမယ့် သူမမှာ
ကိုယ်ဝန်ရှိသွားမှာ အရမ်းကြောက်လို့ရယ် ညီတော်မောင်ကတော့ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့
ဒါပေမယ့် …… ရှာဖွေလေတွေရှိလေပဲဟာ နည်းလမ်းတော့ရှိရမှာပေါ့ ….။
” စီးပွားရှာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာ ”
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးကျွန်တော် တဒင်္ဂစာမဆင်ခြင်မိရင် သူရော ကျွန်တော်ပါ အရွယ်မရောက် ခင်ဒုက္ခသုက္ခမရောက်ချင်ဘူး ။အဲဒါသူအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ပါ ။ဒါပေမယ့် ထိန်းချုပ်
နိုင်စွမ်းဟာတွေဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့လျှော့ရဲလာတယ် ဒီထက်ဆိုးရင်အားလုံးပြသနာတွေတက်ကုန်မယ်လိုတွေးမိပြီး ဆရာသမားကိုအကူညီတောင်းတော့ အတွေကြုံရှိတဲ့ သူကအကြံပေးတယ် ဆေးတိုက်တဲ့ ။ဆေးတိုက်ဖို့ဆိုတာက ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေဆိုအကြောင်းမဟုတ် မဖြစ်ရသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျတော့ ကောင်မလေးက လက်ခံပါ့
မလား ကျွန်တော်မေးခွန်းကြောင့် ဆရာသမားက နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုချပြတယ် ကွန်ဒွန်သုံးမလားတဲ့ အဲနည်းလမ်းမဆိုးဘူး ဒါပေမယ့် သွားဝယ်ဖို့ကျတော့ ကျွန်တော်မှာ
ပြသနာရှိတယ် နောက်ထပ်ဆိုးတာက သိမ်းဖိုဆည်းဖို့ကလည်း တဒုက္ခ မတော် အမေတွေ့သွားမှဖြင့် ကွိုင်အကြီးကြီးပူသွားနိုင်တယ် ။
ဆရာသမားက သူဝယ်ထားမတဲ့ ဆော်ချင်ရင်လာယူလှည့်ဆိုပဲ ကျေးဇူးကြီးပါပေ့ဗျာ။အလကားလား မဟုတ်ပါဘူး ဆရာသမားက တစ်ခုဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တဲ့ အပြင်ဈေးနဲ့လားငါးဆလောက်ကြီးတယ် ။ကိုယ်ဘက်ကလိုအပ်ချက် ဆိုတော့ကလည်း ၀ယ်ရမှာပေါ့ဗျာ ဘာတတ်နိုင်မလဲ။လက်ငင်းတော့မဟုတ်ဘူးအကြွေး ဒါမှလည်း တန်မှာလေ တပည့်ကကျေးဇူးသိတာ ။ 😛
ကိုင်း … လိုအပ်ချက်တွေကပြည့်စုံနေပြီ ဘာများနှောင့်နှေးနေဖို့လိုဦးမလဲဗျာ လိုရာခရီးဆက်ပန်းတိုင်းစီ ချီတက်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်လက်နှင့်ပြည့်စုံနေပြီဆိုတော့ —–
အဲဒီ့နေ့က မိုးလေးဖွဲဖွဲရွာနေတယ် ကျောင်းကိုသွားမတက်တော့တာ တစ်လနီးပါရှိနေပြီချစ်သူကို ချစ်စမ်းမောင်နီးနီးလက်စွမ်းပြထားတော့ အရင်လိုအတင်းအကျပ်စည်းရုံးစရာ
မလိုတော့ပြီ အိမ်ရောက်ရင် အခန်းထဲဝင်ပြီး အိပ်တတ်နေပြီ ။ကိုယ်များဆရာသမားနဲ့ လေကျနေရင် မမချောက စိတ်တောင်ကောက်ချင်ကောက်နေတတ်တယ်။
လက်နပ်ကြီးကိုဘောင်ဘီအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ အပေါ်တက်လာတယ် အိမ်သာထဲဝင်ပြီး ထုတ်ကြည့်လိုက်သေးတယ် ။မာခေါက်ခေါက်သေးသေးလေး ဆရာသမားကတော့ပြောလိုက်
တာပဲ ဘူစီဘောင်းလေးလိပ်ထားသလိုပါပဲထဲ အဖျားမှာတော့ပြီး လက်နဲသပ်ချလိုက်တဲ့။ပွဲကတွေတော့မှာပဲဟာကိုနော့ ။
ချစ်သူပါးလေးကိုနမ်းလိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဖက်ထားလိုက်တာ အတော်ကြာကြာကြီးနေတော့မှ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းဖို့ကြိုးစားတော့
“” မောင် … နေတိုင်းနမ်းနေတော့တာပဲ တစ်နေ့တစ်လေလေးအေးအေးဆေးဆေးနေပါဦးလားတဲ့ “”
နေစရာလားနော့ ။သူမကအမြဲပြောနေကျစကား ကျွန်တော်ကလည်း အမြဲတမ်းခေါင်းငြိမ်းနေကျ
“” မိုး ကလည်းကွာ စာမွဲနီးလာရင်ဒီလိုနေချင်တိုင်းတောင် နေလိုရတော့မှာမဟုတ်ဘူး “” လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့
“”ဟုတ်တယ်နော် ။ မိုး တို့အစမ်းစာမေပွဲတောင်နီးလာပြီတဲ့ “”
စာဖက်ကိုစိတ်ရောက်သွားရင် လိုရာခရီးမရောက်တော့မှာဆိုးလို့လိုရာပဲဆက်လိုက်ပါတော့။အရင်က တီရှပ်လေးမ ပြီးစိုရာကနေ အခုဆို အကျီကြေမှာဆိုးလို့ဆိုပြီး ချွတ်ချွတ်ထား တတ်
နေ သူမတီရှပ်လေးချွတ်ဖို့မတင်လိုမတင်လိုကတော့ ပန်းရောင်ဘရာလေး က စိတ်ဝင်စားစရာစွဲဆောင်နေပါတော့တယ် ။
ဇတ်ကနဲ့ သူမရင်သားကို ဘရာပေါ်ကနေကုန်းနမ်းလိုက်ပါတယ် ။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လို့ဆိုရမှာပဲဇိုးကနဲဇတ်ကနဲ့ လုပ်တတ်တာကျွန်တော်အကျင့် သူမပြောဖူးတယ် ။အဲလိုလုပ်တာ သူမရင်ဖို
ရပါတယ်တဲ့။သူမရဲ ဘရာလေးကိုပင့်တင်ပြီးတော့ ရင်သားလုံးလုံးလေးတွေကို တရှိက်မတ်မတ်နမ်းလိုက် ခေါင်းလေးတွေပထမအကြိမ်တုန်းကလို အတွင်းကိုဝင်မနေတော့ ကျွန်တော်
နမ်းစုတ်လိုက်တဲ့အခါ အခုဆိုရင်ခေါင်းလေးတွေဟာ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုအချက်ပေးသင်္ကေတဖြစ်နေပါပြီ စိတ်တအားတက်ကြွလာရင် သူမခေါင်းလေးတွေ မာတင်းလာတတ်ပါတယ်။
ဒူးဖုံးစတတ်လေးတွေဝတ်လေ့ရှိတဲ့သူမက အရင်အကြိမ်တွေကတော့ ဘယ်တော့မှ စကဒ်ကိုချွတ်လေ့မရှိဘူးဒီကနေ့တော့ အစွဲချွတ်ရမယ့်နေပဲလို့စိတ် ဒုံးဒုံးချ ပြီးသူမရဲ ပူနွေးနွေး နူးညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးဆီကိုလက်ရောက်သွားပြီး သူမပန်တီလေးကို အသာပဲဆွဲချွတ်ချလိုက်ပါသည်။
အခုအချိန်ထိ သူမနူးညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကို မမြင်ဖူးသေးပေ ကျွန်တော်သာလေးတို့ထိကြည့်လိုက်တော့ သူမရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးဟာ မျက်ရည်ဝဲလို့ စိတ်ထဲမှာတော့လေတောင်ချွန်
လိုက်ပါသေးတယ် ။ အဆင်သင့်ပဲ အဆင်သင့်ပဲဟေ့ ဆိုတဲ့သီချင်းထဲကလိုပေါ့ ။ သူမကိုအာရုံပြောင်းဖိုလိုအပ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်ကွန်ဒွန်ဝတ်ဖို့ အဲဒါကြီးထိုင်
စွတ်နေရင်လည်းမဖြစ် ။သူမရင်သားတွေ ကိုပြန်ပြီး ကိုင်တွယ် နမ်းရှိုက်ရင်းက သုတ်ခနဲရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီး ကွန်ဒွန်ကိုချွတ် ညီတော်မောင် ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး အုပ်ထုတ်ဆောင်းပေးတယ် အလောကြီးအုပ်ထုတ်ဆောင်းပေးတော့ စွတ်ချလို့ကိုမရဘူး ဟမ် — ဘယ်နှယ့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုပြီး အသေချာကြည့်တော့မှ ပြောင်းပြန်ကြီးဆောင်းပေးနေတာကိုးဗျ ဘယ်ရမတုန်း ။
ဦးဖိုးကျားပြောသလို ကျွန်ုပ်ဗဟုသုတတိုးသောနေ့လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး ။ 8)
ကွန်ဒွန်တပ်ပြီးတော့ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့ သူမကတစ်ခုခုသွားလုပ်တာဆိုတာရိပ်မိတဲ့ပုံပဲ
“” မောင် .. ဘာသွားလုပ်တာလဲ “”
“” ဆီး သွားချင်လို့ပါ “”
ကျွန်တော်ဆီကအဖြေရတော့ အစောတုန်းကမော့ကြည့်တဲ့ သူမခေါင်းလေးကိုခေါင်းအုံးပေါ်ပြန်ချလို့ ကျွန်တော်ဆီကိုကမ်းလင့်နေတယ် စကတ်ကြားထဲက သူမညီမလေးကိုတစ်ချက်
လှမ်းကြည့်လိုက်တာ သူမမြင်သွားတော့ ပေါင်လေးကိုစုလိုက်ပြီး
“” ဘာကြည့်နေတာလည်း “”ဆိုပြီးကျွန်တော်ကို ရှက်ဝဲ၀ဲလေး ရန်ထောင်လိုက်သေးတယ်။
စိတ်ထဲမှာတော့ တွေကျသေးတာပေါ့ကွာလို ကြုံးဝါးနေတာပေါ့ဗျာ ။
အဆုံးစွန်သောလိုလားမှုတွေ မမြိုသိပ်နိုင်တော့သော ဆန္ဒတို့ရဲ့ တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ မွတ်သိပ်သော အနမ်းတို့က အခြေနေတစ်ခုကိုတွန်းပို့လိုက်တော့တယ်။တကယ်ဆို
ချောက်ထဲကျတဲ့နေ့ပါ — ရမ္မက်ရဲ့ ထောင်ချောက် ဆားငန်ရေမရလို့ ရိုးရိုးရေကိုပဲဆားခတ်လိုက်မိတော့ ။
ကျွန်တော်ဘာကိုတောင်းဆိုနေပြီဆိုတာ သူမ မသိပဲမနေခဲ့ပါဘူး ညင်သာသောအထိတွေ့နှင်အတူ သူမရဲ နူးညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးဟာ ပိုမိုစိုစွတ်သည်ထက်စိုစွတ်လို့ ကြောက်
ရွံစိုးထိပ်ခြင်းတွေ ကိုယ်စီနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မယ် ညီတော်မောင် စစ်သူကြီးကခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့ချွန်းဖွင့်လို့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ အသာထိမ်းလို့ နူးညံတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကို ပွတ်သတ်လိုက်တဲ့
အခါမှာ သူမတစ်ကိုယ်လုံးတုန်ရီလို့နေတော့တယ် ။
ဟမ် — ဘယ်မှာတုန်းငါ့ရဲ ပစ်မှတ် ကျွန်တော် – – – ကျွန်တော်ရှာမတွေ့ဘူး လိုအပ်ချက်ကိုရှာမတွေ့တော့ စိတ်ဇောကတွန်းပိုနေပြီ သူမဆီက ငြီးသံသဲ့သဲ့ကလည်း ကျွန်တော်ကို အရမ်း
ပြင်းထန်နေစေခဲ့လေပြီ ညီတော်မောင်ကိုဘေးခနချပြီး သူမရဲ့ နူညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကိုလက်နဲ့ပွတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်ပစ်မှကို လက်ညှိုးလေးနဲသာသာလေးထိုးထည့်လိုက်တော့
“” အိ – – – ခနဲ့ “”
ညည်းငြူရင်း သူမရဲ သက်ပြင်းသံတွေက ပိုမိုဆူညံလာနေခဲ့ပြီ ထဲ့ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးကို ပြန်မထုတ်တော့ပဲ ညီတော်မောင်ကို လက်ညှိုးပေါ်ခေါင်းတင်ပေး
ပြီး လျှောက်လမ်းအတိုင်းတွန်းထည့်ကြည့်ဖို့ အားထုတ်လိုက်ပါတော့တယ် ဘယ်လိုမှထည့်သွင်းလိုမရတဲ့ သူမရဲ့နူးညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေး ကိုကြည့်ရင်ကနေ ကျွန်တော်ရဲစိတ်
အဆင်က မရမက အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတော့သည် ။ နောက်ဆုံးကြံရာမရဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး သူမကိုဆွဲထူ ဘေးနားက ခွေးခြေပုလေးပေါ်ထိုင် သူမကိုအပေါ်တက်ခွက်ခိုင်းပြီး
လက်ညှိုးခံအ၀တေ့ပြီး အတင်းဖိချလိုက်တဲ့အခါမှာ ညီတော်မောင်ခေါင်းကအိကနဲ့နိမ့်ကျသွာ့းပြီး – — – သူမဆီက ပြင်းထန်တဲ့ အော်သံနှင့်အတူ ကျွန်တော်ပေါင်ပေါ်ကနေ အောက်
“” ဒုန်း – – – “”
“” အဟင့် – – – အဟင့် “”
ရှိုက်သံနဲအတူ သူမ ရဲ့ဟာလေးကိုလက်တစ်ဖက်က အုပ်ကိုင်ရင် မျက်ရည်တွေ ပြိုကျလာတယ်တဒင်္ဂအချိန်ပိုင်းလေးတွင်းမှ ကျွန်တော်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ် ဘာပြောရမှန်း
မသိတော့ဘူး ။ ကျွန်တော်သတိပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူလေးကို ညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ ဒါဟာ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘော ၊ ဒီလိုဖြစ်သွားမှာ နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေမယ့်အကြောင်း ဘာမှ
စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတာလေးကို သူမကို ရှင်းပြလိုက်ပါသည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျနေတဲ့ သွေးစက်တွေကိုကြည့်ရင်း သူမ သွေးပျက်စိတ်ခြောက်ခြားနေတာအတန်ငယ်လျှော့ပါးသွားပြီး ကျွန်တော်ရင်ထဲခေါင်းတိုး ငိုနေတော့သည်။ဒီနေရာမှာ
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ အတ္တကြောင့် ကျွန်တော်ကျေနပ်နေမိတယ်ဆိုတာ မရှက်တန်းဝန်ခံရမှာပါပဲ – – ထိုအတူ အဲဒီအတ္တကြောင့် ကိုယ်ကိုကိုယ် ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာဖြစ်ခဲ့ရမှန်း
ဒီအချိန်ထိ နောင်တရနေမိတုန်းပါ — ။
သူ့ကိုရေချိုးခန်းထဲလိုက်ပိုပြီး ကိုယ်လက်သန့်စင်ခိုင်းပြီး အမေအခန်းထဲမှာ မျက်နှာပြန်လည်ချယ်သခိုင်းပြီးတော့ ဟန်မပျက်ပြန်နေရင်း သူငယ်ချင်းတွေအလာကို အောက်ထပ်ဆင်းစောင့်
နေပါတော့သည်။ ပြောမပြတတ်တဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ချစ်သူကတော့မျက်နှာလေးနွမ်းနေတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ထိန်းသိမ်းရမယ် အရာတစ်ခုကို
ကျွန်တော်ကြောင့် ပျက်ယွင်းသွားမိပြီဆိုတာ ။
အိပ်ယာက ထ, ပါတော့ ကမ္ဘာမြေကြီး၊
မင်းရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထောင့်ထဲကို ဖိတ်ကျခဲ့တဲ့
အိမ်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက် သူမဆီကစကားသံ တိတ်ဆိတ်လို့ ကိုယ်အပြစ်နဲ့ကိုယ်မလိုပြောစရာစကားလုံး ဆွံ အ လို့နေတော့သည်။တိတ်တဆိတ်သူမ အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ပျောက်
ကွယ်သွားတော့မှ နှစ်သိမ့်စရာ စကားတစ်ခွန်းတောင်မဆိုလိုက်မိတဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်နေမိပြန်တော့သည်။တကယ်ဆို တစ်ခုခုတော့ပြေလိုက်သင့်တယ် ။အဲဒီညက စာဖတ်တာ
စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ စောစောစီးစီးအိပ်ရာဝင်ပြီးနေလည်ကအဖြစ်အပျက်ကိုအပြန်လှန်တွေးနေမိသည် ။ ခေါင်းထောင်လာတဲ့ ညီတော်မောင်ကို ထိပ်ခေါက်ရမကောင်းရှိတော့မယ်။
“” နင့် ကြောင့် …. နင့်ကြောင့် “” လို့ရိုက်နှက်ဆုံးမလိုက်ချင်ပေမယ့် မရိုက်ရက်ပါ။ ;D
ဒီလိုနဲ့အလင်းတွေပွင့်တဲ့နေကိုရောက်လာပြီပေါ့ .. ၀တ်မှုန်ကူးချင်တဲ့ ပျားတစ်ကောင် ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရင် သူမဟာ ၀တ်ရည်ချိုတို့နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အိမ်တံခါးကို သောမခတ်ပဲ အသာစေ့ထားပြီး သူမအလာကိုမျှော်နေမိတယ် ။ တံခါးပိတ်သံပြီးတော့ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာတဲ့ခြေသံ ကျွန်တော်အခန်းတံခါးရှေ့မှာ ရပ်တန့်နေတာ
အကြာကြီး စိတ်မရှည်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာ တံခါးကိုဖြတ်ခနဲဖွင့် သူမကို ဆတ်ခနဲဆွဲခေါ်သွင်းသူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို တရှိုက်မက်မက်နမ်းမိတော့သည်။
“”မောင် .. မကောင်းဘူးကွာတဲ့ “” သူမမျက်နှာမှာပန်းသွေးရောင်ဖျော့ဖျော့သန်းနေလို့
“” အခုကော နာနေသေးလို့လား “”လို့ကျွန်တော်အမေးမှာတော့
“”သိဘူး .. လာမမေးနဲ့ တဲ့ “”
ဆားငန်ရေတွေကိုသောက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံကိုကျွန်တော်ကြားဖြစ်အောင်ကြားလိုက်သေးတော့သည်။ ရင်သားအိအိလေးတွေကို ကိုင်တွယ်
လိုက်တဲ့အခါမှာ သူမတစ်ကိုယ်လုံး ရင်ခွင်ထဲပြိုလဲကျလာတော့သည်။
သူမပန်တီ သေးသေးလေးကို ဆွဲချွတ်ပလိုက်တယ် မနေကတုန်းကပေါက်ကွဲခြင်တဲ့စိတ်ကိုဒီနေ့မှာတော့ အပြင်းထန်ဆုံးဖောက်ခွဲပစ်ဖို့ရည်ရွယ်လိုက်တော့
“” ဖြေးဖြေးနော် … မောင်တဲ့ “”
အပြောမဟုတ်အလုပ်နဲ့သက်သေပြဖို့ အချိန်တွေမဖြုန်းချင်တော့ဘူးလေ ။ နူးညံ့တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကို အပေါ်အောက်ပွတ်သတ်
လိုက်ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်းထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။ အင့် .. ခနဲအသံတစ်ချက်ထွက်ပြီးကျွန်တော်လက်မောင်းကို သူ့လက်အစုံက စုတ်ကိုင်လာတော့သည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း
အဆုံးထိရောက်အောင်တိုးဝင်သွားတော့ ကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ဖက်ထားရင်း အဖျားတက်သလို သူမရဲ ညည်းသံလေးတွေ ဆူညံ့လာတော့သည်။
နွေဦးရာသီဟာ ချယ်ရီပန်းတွေကို မေ့သလိုပေါ့။
မြို့ဟာ ကြယ်တွေကို မေ့သလိုပေါ့။
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူ့စိတ်ကို မေ့သလိုပေါ့။
ကာဝါအီ (Fuyuhiko KITAGAWA)ရဲ့ ကဗျာထဲကလို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အကုန်လုံးကိုမေ့လို့ အချစ်ဖြင့်ပေါင်းကူးဆက်သွယ်နေလိုက်တာ ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုနှင့် အတူခရီးဆုံးပန်းတိုင်ဆီသို့ ပြိုင်တူချီတက်လိုက်တော့သည်။သူမဘေးကို လှဲချတိုးဝင်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ကို အတင်းတိုးဝှေ့ပြီးဖက်ထားလိုက်တာ ကမ္ဘာဦးလူသားနှစ်ဦးတည်းရှိတော့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဂရိ ဒဏ္ဍာရီထဲက ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကိုယ်ပွားလေးကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲ ။ကျွန်တော်တို့
ပိုမိုနီးကပ်သွားသလို ပိုမိုနားလည်မှုရှိလာခဲ့သည်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပျောက်မခံနိုင်ပဲ အချိန်နဲ့အမျှသူအကြောင်းတွေ တွေးနေမိတော့သည်။ ဒါပေမယ့် …..
ကျွန်တော်စာဖတ်နေတုန်း အမေကအခန်းထဲခဏခေါ်သွားပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ခုကိုပြတယ်စာရွက်အပိုင်းလေးပေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ ပြီးတော့ မောင့်အတွက်လိုရေးထားတဲ့ စာတန်းလေးတစ်ခု – – ဟိုက် – – – ပြသနာတော့အလုံးလိုက်ဆောင့်လေပြီ သူမ ကျွန်တော်ကို နေတိုင်းပေးလေ့ရှိတဲ့အမှတ်သား တစ်ခုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နှစ် ယောက်ပဲသိတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပဲလေ ။ အဲသည့်အချိန်တုန်း ကြိုးဆွဲနှုတ်ခမ်းနီတွေ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်သူမကလည်း တစ်နေ့အရောင်တစ်မျိုးနဲ့ ကျွန်တော်အတွက် အမြဲတမ်း နှုတ်ခမ်းပုံလေးရအောင် နမ်းပြီးမှပေးလေ့ရှိတယ် ခေါင်းထဲမှာအပြေးအလွှားစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းက ဖြေရှင်းချက် နောက်ဆုံးတော့ဟစ်တလာနည်းကိုပဲသုံးလိုက်ပါတယ် ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ
လိမ်လိုက်ပါတော့သည်။ကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဘူး – – – မသိဘူးပေါ့ ။ ဒါဆိုဘာလိုနင့်အခန်းထဲကိုရောက်နေတာလည်း ဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်လေသည် ။ ကျွန်တော်အခန်းထဲကို သူငယ်ချင်းတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာပဲ သူတို့ထဲကကျန်ခဲ့တာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီး ဆင်ခြေတက်လိုက်တော့ မားသားကြီးနည်းနည်းတော့တွေဝေသွားပါတယ်
ကောင်းပြီ နင်သူငယ်ချင်းတွေလာရင် မေးကြည့်မယ်တဲ့ မေးကြည့်လိုက်ပေါ့လို့သာပြေလိုက်ရပါတယ် ရင်ကတော့ တထိပ်ထပ် မတော်လိုများ သူတို့မသိဘူးဆိုရင် သေပြီဆရာ ။
အခုမှတော့ မထူးဇာတ်ခင်းရပြီပေါ့ဗျာ။ ပေါက်တဲ့နဖူး မထူး — ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းချည်းပဲဆိုပြီး ဇွတ်ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရှာတော့သည်။
ကိုယ်ရဲ့ဇာတ်ရှုတ်မှာ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်ကတော့ ချစ်သူငယ်ချင်းညီညီပဲဖြစ်လေတော့သည်။ သူကပြောရှာပါ၏ စားရတော့မင်း ခံရတော့ငါ တဲ့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲအရူးကွက်နင်းကာ သူငယ်ချင်းကို ပတ်ချွဲနပ်ချွဲလုပ်လိုက်ပါတော့သည်။မတတ်နိုင် ကုစရာဆေးက တနည်းပဲရှိ၏ ပြောသမျှခံကာ အမေပျောက်ပြန်တွေ့လေသော ခွေးသားပေါက်သဖွယ် ဘော်ဒါကြီးအား ကျွေးမွေးပြုစုပြီးသကာလ ခေါင်းခံခိုင်းလိုက်ရချေတော့၏ ။
တပူအေးလို့ စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျန် ပါသေးသည် နောက်တပူကရောက်လာပြန်ချေပြီ ။ ဒီအပူကပိုကြီး၏ ချစ်သူလေးက ဓမ္မတာ မပေါ်ဟုလိုသည်။အလိုလေးလေး – – – ဒီတစ်ခါတော့ကြွပြီ ဟုထင်မိတော့သည်။ဆရာသခင် ကျေးဇူးရှင်ဆီ ပြေးအလွားအကြံဥာဏ်တောင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဟုအတိအကျဆိုလေသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လျှင်လည်း ဓမ္မတာငုတ်တတ်သည်ဟု နားကြားရပြန်၏။အကောင်းဆုံးမှာ ကေသီပန်တိုက်ပြီး ကျေလည်အောင်ရှင်းလင်းပြလိုက်လျှင် အဆိုပါကိစ္စမှာ ပြေလည်သွားနိုင်ပါသည်ဟု ညွန်ကြားလေတော့သည်။
တစ်ခါလောက်ဟိုနင်းပြုမိပါတယ် ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် တော်ပြီနောက်မလုပ် တော့ဘူးဟု စိတ်ဒုံးဒုံးချဆုံးဖြတ်မိချေ၏။ချစ်သူလာတိုင်း ဘာများပြောမလဲဟုစိုးတထိပ် ထိပ်ကြည့်နေရသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလေစွ။နှစ်ယောက်လုံးမှာ ဟိုနင်းမလာလျှင်ဖြင့် ရွေးစရာနည်းကမရှိတော့ချေ။ အသက်ကလည်းမပြည့်သေး စဉ်းတောင်မစဉ်းစားဝံ့ ခိုးစားတုန်းက ခိုးစားပြီး အခုမှရင်ပူနေရတော့သည်။
နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာသောအခါ သူမထံမှာ ပြုံးစိစိဖြင့်လာနေပြီဟုသိရသော အခါမှ စိတ်ဒုံးဒုံးချနိုင်တော့သည်။အခုပြန်စဉ်းစားလျှင် အတော်ရီစရာကောင်းသောအဖြစ်ကို
ထိုအချိန်တုန်းက သွေးပျက်လုခမန်းကြောက်ရွံ့ခဲ့ရလေတော့သည်။ယခုတော့ ကျွမ်းကျင်ရုံမျှ တင်မက တဖက်ကမ်းပင်ခတ်နေသေးတော့သည်။( ဤကားစကားချပ်) ထိုအကျိုးဆက်ကအချိန်တစ်ခုထိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအား ခြောက်လှန့်ထားနေတော့သည်။ ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်လည်း ဘတ်ဂျက်ထိခိုက်တော့သည်။တကယ်တော့ ရှေတလှမ်းတိုး ဖို့နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ခြင်းသာဖြစ်ဟုဆိုရပေတော့မည်။ သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်တို့ လာလေပြီ
အချိန်တိုင်းနီးပါအတူရှိနေတာကနေ ရုပ်တရက်ခွဲလိုက်ရတော့ သူရော ကျွန်တော်ပါ မနေတတ်မထိုင်တတ်တွေဖြစ်လို့ တစ်နေ့တစ်နေ့သူကိုသွားသွားခိုးခိုးကြည့်နေရတာ
အကြိမ်ပေါင်းမနည်းချေ။အချိန်တိုင်းစဉ်းစားမိတာ သူမအကြောင်းတွေချည်းဖြစ်နေတော့ ခံစားချက်ကပြင်ထန်လို့နေတော့တယ်။စာကျက်လို့လည်းမရဘူး
အချိန်တိုင်းသူအရိပ်တွေချည်းပဲ။သူငယ်ချင်းမတွေကိုအကူညီတောင်းပြီး ပွဲဈေးတန်းလျှောက်လည်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုယ်ကနေနိုင်သည်ပဲထားဦး ညီတော်မောင်ကတော်တော်ပူဆာပါသည်။
သူငယ်ချင်းမတွေနဲ့ ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာ ပြန်တွေမယ်ပြောပြီးတော့ ပွဲဈေးတန်းရဲ့ အလွန်မှောင်ကျသောနေရာဆီသို့ ဦးတည်ခဲ့လေတော့သည်။
ကျွန်တော်ပုခုံးလေးကိုမှီတွဲရင်းချစ်သူကို အလွမ်းပြက္ခဒိန်ပေါ်ကနေတွေအကြောင်းပြောပြနေမိတော့ ကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးတိုးဖက်လာခဲ့တယ်။အချစ်ဆိုတဲ့
အဆိပ်က တရိပ်ရိပ်တိုးတက်နေလို့ မွတ်သိပ်သောအနမ်းက ချိုမြိန်သော သူမ နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးက ပြင်းထန်မြန်ဆန်တဲ့အသက်ရှုသံတွေက တွန်းအားပေးနေတော့သည်။
ဆတ်ကနဲဖယ်ခွာပြီး ကျွန်တော်ပါးကိုမွတ်သိပ်တက်မက်စွာနမ်းလိုက်တော့ – – – အလွမ်းကိုခေတ္တတော့မေ့နိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါလေရဲ့
” သိပ်လွမ်းတာပဲ – – – မောင် “ရယ်တဲ့ ။ကျွန်တော်ပြန်ဖြေစရာစကားမရှိခဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်သူမကိုပွေဖက်ထားခဲ့တာအချိန်တွေတောင်ကုန်မှန်းမသိတော့။
ကျွန်တော်လည်း မသိခြင်းတွေနဲ့နစ်မွန်းလို့ တားမြစ်ထားတဲ့သစ်သီးတစ်လုံးကို ခုံမင်စွာစားသုံးမိတော့ပြန်သည်။အချစ်သည်အရာရာကို ကန်းစေသည်လို့ရှေးစကား
ရှိခဲ့ကျတယ် ။ ကျွန်တော်တို့လည်း မျက်ကန်းလိုမျိုး အရာရာမှာနံပတ်တစ်အချစ်လိုသတ်မှတ်လိုက်ကျတယ် သူရော ကျွန်တော်ရောပေါ့ ။အရေးကြီးတဲ့အလှည့်အ
ပြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကျတယ်။ အခုချိန်မှာ ဒါဟာ ရီစရာဖြစ်နေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အချိန်တုန်းက မိန်းကလေးအခန်းထဲကိုခိုးဝင်တွေ့ဖို့ဆိုတာ
တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့အရာပဲ။ကျွန်တော်ပဲကံကောင်းတာလား သူပဲကံဆိုးတာလားမသိပေ။ သူမနှင့်အတူ အဖော်အဖြစ်သူမိဘများက အဘွားကြီးတစ်ယောက်
နဲအတူတူအိမ်မှာထားပေးတယ်။အဘွားကြီးကမိုးချုပ်ရင်အပေါ်ထပ်တက်ပြီး အိပ်ပြီ ပတ်ဝန်ကျင်လူခြေတိတ်တဲ့အချိန်မှ တိတ်တခိုးသူမဆီသွားလို့ ကျွန်တော်တို့
မကြောက်မရွံ အချစ်ရဲတွန်းအားလား ရမ္မစေစားရာလား ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်အတွက်လည်းမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ ညပိုင်းဂိုက် အိပ်တဲ့အထိစောင့်
မအိပ်ခင်မှာ ဂိုက်ဆရာသမားနဲ့တစ်နေ့စာသင်ခန်းစာတွေ ကြေညက်အောင်ဖတ်ပြီးတော့မှ ဆရာသမားကအိပ်တယ်။အဲသည့်အချိန်ကျမှ ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကို
ဆင်းလို့ ခြေသံမကြားအောင် မိဘများမနိုးအောင်အသာလေးဆင်း အိမ်တံခါးသော့ကိုယူ အသာလေးဖွင့်ပြီးတော့ သူမဆီအပြေးအလွားသွားခဲ့မိတယ် ။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဒေါ့ဖိုက်တာတွေရန်က ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ဒုတ်တစ်ချောင်းလည်းယူသွားရသေးတယ်။မလွယ်ဘူး အဲသည့်ကောင်တွေက
အုံနဲ့ကျင်းနဲ့လိုက်ဆွဲတာ ။ သူမအိမ်နားရောက်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်အသာကြည့်လို့ အားလုံးကလီယားဖြစ်ပြီဆိုရင် လမ်းပေါ်ကနေသူမ အိမ်ရှေ့က ခြံတံခါးနားကိုဖတ်ခနဲ့
ပြေးကပ် ပြီးရင် အုတ်တံတိုင်းကျော်တက် တံခါးကြားကနေ အသံတိုးတိုးဖြင့် သူမကိုခေါ်လိုရင် တံခါးချပ်ကြားက ချစ်သူမျက်နှာလေးပေါ်လာရင် ကျွန်တော်
မြွေမကြောက်ကင်းမကြောက် ကျွန်တော်အဲလိုတွေခဲ့ဖူးသလို ၊ ဒေါ့ဖိုက်တာတွေနဲ့အလဲအကွဲလည်းဆော်ခဲ့ဖူးခဲ့လေရဲ့ထိုအတူ သူခိုးထင်လို့လည်းအလိုက်ခံဖူးခဲ့ပါလေတော့သည်။
ကျွန်တော်သူမကိုပြောလေ့ရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိခဲ့သည်။ဒို့တွေချစ်ကျတာပဲ ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်းမြန်မြန်အောင်မှနီးစပ်မယ်လို့ သူကိုပြောခဲ့မိသည်။အဲသည့်လိုပြော
တိုင်းလည်း သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်သက်သက်နဲ့ ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့နေရက်များအတွက် ကျွန်တော်နောင်တတော့မရမိ ဒါပေမယ့်
တိတ်တဆိတ်ဝမ်းနည်းမိချေ၏ အချစ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်လိုမှတ်ယူမိလိုပဲထင်ပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်လို့ သူမခံစားချက်တွေက ကျွန်တော်ခံစားကိုကိုယ်စားပြု
ခဲ့လေတော့ ။ တစ်ခါတစ်ခါရူးသွပ်စွာလွမ်းမော့မိပြန်သည်။ကထိန်ပွဲကြီးရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နာမည်နဲ့ ဓါတ်ဗူးလေးတစ်လုံးလှူခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်ဘ၀မှာ ပထမဆုံးစားသုံးဖူးတဲ့ပီတိပဲဖြစ်ပေလိမ့်မည်။တကယ်လည်းအဲသည့်နေ့ရက်တွေကို အမှတ်တရလွမ်းဆွတ်တမ်းတမိပါတယ်ချစ်သူ တကယ်လိုသာ
နောက်တစ်ကြိမ် အခွင့်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် – – –
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 09:03